कोशी गा. पा. Archives - inaruwaonline.com
चाइनिज स्याउ भारतीय क्षेत्रमा पक्राउ परेसँगै नेपाली सीमा क्षेत्रमा कार्यरत चार दर्जन बढी सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । आज विहान भारतको बिरपुर खण्डमा तीनवटा नेपाली नम्बर प्लेटका ट्रक चाइनिज स्याउ सहित भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही स्याउ तस्करीको क्रममा नेपाल तर्फको भूमि प्रयोग भएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा मातहतका सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । जस अन...
नेपाली काङग्रेसको उद्योग तथा व्यबसाय क्षेत्रको बिज्ञको रुपमा मनोज कुमार साहलाई न्युक्त गरिएको छ । नेपाली काङग्रेसको बिषय गत समितिको रुपमा रहेको उद्योग तथा व्यबसाय क्षेत्रको बिज्ञको रुपमा साहलाई न्युक्त गरिएको हो । पार्टीको बिधान २०१७ (संशोधन सहितको) ३१ (१) ङ बमोजिम समितिको बिज्ञको रुपमा मनोति गरिएको छ । लामो समय देखि काग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहदै आएका साहलाई उद्योग तथा व्यबसाय क्षेत्रको बिज्ञ...
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पछिल्लो अवधिमा ५७ वटा अर्ना थपिएका छन् । २ वर्षअघि ४ सय ४१ वटाको संख्यामा रहेको अर्ना पछिल्लो गणनाको क्रममा भने ५७ वटाले वृद्धि भएको पाइएको छ । आरक्ष कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार १२ दशमवल ९ प्रतिशतले अर्नाको संख्यामा वृद्धि भई कुल संख्या ४ सय ९८ पुगेको छ । आरक्षले आज अर्ना गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संख्यात्मक वृद्धि बारे जानकारी दिएको हो । सार्वजनिक प्रतिवेद...
जंगली हात्तीको गतिविधि बढेसँगै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालयले सर्वसाधारणको गतिविधिमा रोक लगाएको छ । आरक्ष कार्यालयले सूचना जारी गर्दै भोलि बाट लागु हुने गरी बैशाख ७ गते सम्मको लागि पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई आरक्ष प्रवेशमा रोक लगाइएको जनाएको छ । आरक्षले चार पाङग्रे बन्द गाडी सहितका पर्यटक आएमा प्रवेश दिइने बताए पनि जोखिम रहेकाले भैपरी अवस्था बाहेक सके सम्म तत्काल आरक्ष क्षेत्रको भ्रमणमा ...
सुनसरीमा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको सवालमा दुई देशीय सीमा संयन्त्रको बैठक समपन्न भएको छ । कोशी टप्पु स्थित अक्वा वर्ड रिसोर्टमा दुई दिन चलेको बैठकले मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको सवालमा रोकथाम नै समाधान भएको निष्कर्श दोहो¥याएको छ । बैठकले नेपाल र भारत दुवै तर्फका संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको समेत औल्याएको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल सहित सुरक्ष...
बुबाकालागि न्याय खोज्दै छोरा
इनरुवा। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–३ का शम्भु मुखियाले न्यायकालागि शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। शम्भु मुखियाका बुबा गंगाई दास मलाहालाई ज्यान मारेको दुई महिना बित्दासमेत दोषीलाई कारवाही नगरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन। अस्सि वर्षिय गंगाई दास मलाहालाई पुस ७ गते राती १० बजेतिर छिमेकीहरुले ज्यान मारेको पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा किटानी उजुरी दिए पनि कारवाही हुन नसकेको पीडित...
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा सम्पन्न तेस्रो वी.पी. कोइराला स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले २ स्वर्ण सहित ४ पदक जितेको छ । कोशी महोत्सवको अवसर पारी आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सेनाले महिला तर्फको ५५ र ६५ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेको हो । सेनाको लागि सिवाङगी दुवे र सुशीला चन्दले स्वर्ण दिलाएका हुन् । पुरुष तर्फको प्रतिष्पर्धामा भने सेनाले एक रजत र एक काश्य जितेको छ । प्रतियोगित...
सुनसरीमा आजबाट तेस्रो वी.पी. कोइराला राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सुरु भएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालय हाता अगाडी सुरु प्रतियोगितामा दुई विभागीय सहित ५ वटा प्रदेशको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताका उद्घाटन पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नु भएको छ । कोशी गाउँपालिका र सृष्टी समाज सुनसरीले आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस र...
सुनसरीको कोशी कटानमा राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । कोशी गाउँपालिकाको कार्यालय र इनरुवाको सृष्टी समाजले कोशी कटानमा प्रतियोगिता संचालनको तयारी थालेको छ । प्रतियोगिता फागुन २ र ३ गते संचालन हुनेछ । आयोजकले तेस्रो वी.पी. कोइराला स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता संचालनमा ल्याउन लागेको हो । प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यक्रम संयोजक बशन्त सुवेदीले जानकारी दिए । स...